4. Android Ozi Iweghachite .
Enyemaka! Mkpa na ekwentị mkpanaaka mgbake!
Ndewo, m na-ebufe data site na otu na ekwentị mkpanaaka ọzọ, na mmadụ na mberede ehichapụ faịlụ site na-ezighị ezi kaadị. My music, photos, videos na niile akwụkwọ na-arahụ. Olee otú m ga-esi ha azụ? Enyemaka ọ bụla ga-kpọrọ ihe. Ihe a ga-eme?
Ihe mbụ gị isi na: Kwụsị ebufe ozugbo na anaghị etinye ọhụrụ ọ bụla data n'ime kaadị. Nọgide nnọọ na-ya n'ebe nke ya, n'ihi na furu efu data ga-overwritten site ọhụrụ faịlụ, nke ga ibelata ọnụego nke ekwentị mkpanaaka data mgbake.
Naa, tinyere ọzọ na ndị ọzọ dị ike color, ndị na-achọkarị iwepụtakwu oge na smart mobile ntị n'ihi na ntụrụndụ, dị ka na-enwe fim na music, na-foto ma ọ bụ mee ka video ndia, ịgụ akwụkwọ ma ọ bụ ọbụna aka akwụkwọ ọrụ. Otú ọ dị, na-arụ ọrụ na mobile ngwaọrụ bụghị dị ka adaba dị ka ya na kọmputa, ma ọ bụ nnọọ mfe na-eme mmehie dị ka ihichapụ faịlụ site akpachapụghị anya arụmọrụ. Ya mere na-echeta na-eme ka backups mgbe nile n'ihi na ndị ahụ dị mkpa faịlụ. Mgbe ahụ ihe na-eme ma ọ bụrụ na ọdachi abịarute na-enweghị backups? Obi abụọ adịghị, a ngwaọrụ mkpanaaka mgbake na mkpa ngwa ngwa.
Esi a na ekwentị mkpanaaka mgbake na-arụ ọrụ kasị mma?
Ka mobile mgbake, e nwere ọtụtụ na ahịa na ọtụtụ n'ime ha pụrụ n'ezie inyere-alaghachi azụ furu efu faịlụ site na ekwentị mkpanaaka. Mgbe ahụ, anyị ga-ahọrọ a mma otu onye si ha na nke ahụ bụ adịghị mfe ọrụ. Ọ bụrụ na ị na-eji ekwentị mkpanaaka gị kaadị maka ogologo oge, e nwere ga-e echekwara ọtụtụ nde faịlụ. Olee otú ịchọta ndị ị chọrọ n'etiti ha? The mbụ faịlụ aha bụ ihe kasị mkpa, nke na-enyere ịchọta lekwasịrị faịlụ ngwa ngwa na n'ụzọ ziri ezi. Otú ọ dị, ọ bụghị ihe niile mobile mgbake software-akwado nke a, ọtụtụ n'ime ha renamed faịlụ mgbe ịgụ isiokwu. Wondershare Data Recovery (Maka Win9) nwere ike naghachi faịlụ na mbụ faịlụ aha, na ọ na-akwado mgbake nke music, videos, photos na ndị ọzọ na akwụkwọ, dị ka nke ọma dị ka Wondershare Data Recovery for Mac (dakọtara na Mavericks). Ha abụọ bụ ndị 100% mma!
Nwere ike ọ n'ezie-arụ ọrụ? Dị nnọọ na a free ikpe ka iṅomi n'ihi na anyị na ekwentị mkpanaaka furu efu data tupu akwụ ụgwọ maka ya.
Wondershare Data Recovery Nwere ike igosi na ekwentị mkpanaaka data mgbake si dị iche iche iche iche nke ika dị ka blackberry, Nokia, Android ekwentị, Samsung, HTC, na ndị ọzọ, n'agbanyeghị na data furu efu ruru ka:
Mmadụ na mberede ehichapụ faịlụ site na ekwentị mkpanaaka kaadị
Ị na ekwentị mkpanaaka kaadị
Ekwentị mkpanaaka kaadị ọkọdọ emerụ ma ọ bụ keerughi
3-nzọụkwụ ndu maka ngwaọrụ mkpanaaka mgbake na Wondershare Data Recovery maka Windows ma ọ bụ Mac
Nzọụkwụ 1. Jikọọ ekwentị mkpanaaka gị kaadị na kọmputa na-eme ka n'aka na kaadị gị nwere ike achọpụtara. Na-agba ọsọ usoro ihe omume ma họrọ kaadị gị ike iṅomi.
Nzọụkwụ 2. Mgbe scanning, ifiọk na-akwado ma ọ bụrụ na gị chọrọ faịlụ na-achọta.
Nzọụkwụ 3. Lelee gị lekwasịrị faịlụ na-amalite na-agbake.
Cheta na: Unu ịzọpụta natara data na kaadị ọzọ. Chọta ebe ọzọ n'ihi na ọ dị ka na kọmputa ma ọ bụ ndị ọzọ na mpụga disk, maka nchekwa echiche.
Video nkuzi nke na ekwentị mkpanaaka mgbake
> Resource> Naghachi> Olee otú iji naghachi faịlụ site Mobile ekwentị mkpanaaka na